Obama oo muwaadin caadi ah ku noqday halkii ay ka soo jeedeen ehelkiisa… – Hagaag.com
Obama oo muwaadin caadi ah ku noqday halkii ay ka soo jeedeen ehelkiisa…
Posted on 18 Luulyo 2018 by Admin in Lifestyle // 0 Comments
Madaxwaynihii hore ee Mareykanka Barack Obama ayaa booqday tuulada ay ku noolaayeen ehelkiisa gobolka Sayaya ee koonfur Galbeed Kenya Isniintii, booqashadiisii ​​ugu horeysay ee Kenya ka dib markii uu ka degay madaxtinimda.
Obama wuxuu furay xarun loogu tala galay dhallinyarada oo aasaastay walaashiis Ouma Obama, oo wax ku bartay Jarmalka. Asaga oo kaftamaya ayuu furitaanka ka yiri “Way fiicantahay in aan ku soo noqdo iyada oo joogaan dad badan oo matalaya qoyskeyga, iyo dad badan oo sheegay inay ka tirsan yihiin qoyskayga,”.
Obama ayaa ka hadlay xasuustiisa markii uu la kulmay walaashiisa markii ugu horreysay oo uu booqday Kenya markii uu jiray 27 sano “Waxaan ku faanayaa howsha ay qabatay walaashey, maanta waxaan imid anigoo walaal ah, qof ku leh qaraabo Afrika, si ay uga hadlaan muhiimadda ay leedahay.”
Waxa kale oo aan la ilaabi karin inta ay socotay booqashada ayaa jirtay qoob ka ciyaar oo dhaqanka xambaarsan asaga oo la dheelay xaaska awoowgiisa Sarah Obama.
Kadib markii uu yimid Kenya Axaddii, Obama wuxuu la kulmay madaxweynaha Kenya Uhuro Kenyatta, oo ku qoray bogiisa Twitter: “Aad ayay u wanaagsan tahay inaan ku soo dhoweeyo soo laabashadaada Barack Obama.”
Obama ayaa u safray Koonfur Afrika Talaadadii, si uu kalmad uga jeediyo munaasabada dhalashada 100aad ee Nelson Mandela.